I-SharePoint I-2016 yobugcisa: Yintoni entsha kubaphuhlisi? - ITS Tech School
I-SharePoint I-2016 yobugcisa: Yintoni entsha kubaphuhlisi?
Yintoni entsha kwiSabelo 2016
Umsebenzi ophuculweyo - Uluhlu
Kulula ukuqonda - Kulula
Ukhuseleko oluphuculweyo - Ukhuseleko
Isabelo isicelo sekhompyutheni esibandakanya iMicrosoft Office. Iqhutywe kwi-2001, i-Sharepoint idayiswa ngokusesikweni njengenkqubo yokugcina kunye nokuphathwa koxwebhu, nangona into iyilungelelanisa kwaye isebenzise ngokungafaniyo phakathi kobulungu. Yomelele kwaye ihlelwe imephu ukufumana amaxwebhu kwi-envelope yabelane. Iinkqubo zokusebenza zomsebenzi onobuchule zinika izikwere zokwakha kunye nokuphuculwa kwesicelo kunika ukuqonda isakhiwo solawulo lweenkcukacha ze-SharePoint ngokuphucula abaxhamli bexesha. Izinto eziphuhlisiwe zigcinwe ngecacing database kunye nokuphathwa kokucatshungulwa kokuqukethwe. Iqhuba iindlela zokulawulwa kwedatha ye-bhokisi yokulawula umjikelezo wobomi beenkcukacha.
Kukho iinguqulelo ezahlukileyo zeSabelo ezizinzileyo:
I-Sharepoint Online yiyona nto inxalenye ehlanganiswe kwiinyanga ze-Microsoft Office 365 ukuya kwinyanga okanye kubulungu bonyaka, kodwa ingafumaneka ngaphandle nangaphandle. Ikhutshelwe kwinqanaba elithile lemizamo yokulungelelanisa, ukusingatha iifayile kunye neemeko kunye nokuphathwa kokuqukethwe kwimixholo, kwaye ihlaziywa ngokufanayo.
Nazi izizathu ze-4 ezahlukileyo ukuba kutheni amaqela athathe iSahluko seSabelo:
Amandla kunye nezinto ezibanzi
Ukuhlanganiswa okucebileyo kunye kunye ne-Office 365
IMicrosoft ibonisa ngokusisigxina kwiKamva ye-SharePoint
Isisombululo se-Out-of-container njenge-Bonzai Intranet nje yenza ngcono i-Intranet yakho ye-SharePoint
Isabelo 2016 liye ladalwa nge-versatile yokuqala kunye neyokuqala kwefu, izinto ezimbini ezithatha ihlabathi ngesiphepho.
Kukho izinto ezininzi kwi-Sharepoint. Ingxenye yezinto ezibonakalayo zichazwe ngaphantsi.
Inkqubo yokwenza iikholeji ezikhompyutheni. Isusa umthwalo womsebenzi kunye nokungahambisani ngokupheleleyo ne-5000.
Umnqamlezo we-Cross Search Model uhambisa izintlu ezinobunini ezihlanganisiweyo kunye nomxholo osuka kwi-Sharepoint Online nakwi-Preface
Ukuhluthwa okungaqhelekanga kwefayile yefayile ukufihla kuye kwenyuka ukusuka kwi-2GB kwi-10GB. Ii-byte zomhlaba weenkcukacha zeenkcukacha zixhaswa kwi-2016 yayo.
Faka iPacks-Abathengi abaneSabelo 2016 baya kubona ukuhlaziywa okubizwa ngokuba yiPacks Features ukuza indlela yabo yokuzisa ukulungiswa kwe-Sharepoint kwi-Office 365 kwi-On-Premises.
Uhlobo lwe-2016 lwolu qhagamshelo luye lwazisa enye into, i-MinRole, eyenza ukuthumela, ukuphucula ukuphunyezwa kunye nekhwalithi engaqinisekiyo, kwaye iququzelele ukuxhomekeka kweefama. Njengoko i-MinRole izama ukulungiswa kuya kuba nzima kwaye yonke imigaqo iya kuba yinkimbinkimbi ekhokhwayo, ngokuqhelekileyo iya kuba yinto enobulumko ngaphezu kokulungelelaniswa kwangaphambili.
MinRole icacile. Ngokusebenzisa le fowuni entsha kwi-Sharepoint Server 2016, abalawuli beefama zabakwa-Sharepoint bangabonakalisa inxalenye yeseva nganye kwifolda yezolimo
I-SharePoint 2016 isekelwe ngokupheleleyo kwi-codebase engaziwayo evela kwi-Office 365. Kubhekwa njengento eninzi, eqinileyo kwaye ijikeleze yonke into eyenza iMicrosoft into ekhoyo njengamanje isetyenziswe zizigidi ngaphambili. Ngokutsho kweMicrosoft, ikhowudi enye iyafuneka ukuba isetyenziswe kuyo nayiphi na inguqulelo ye-SharePoint.
Uhlobo olusandul 'ulwabiwo olutshanje luhamba kunye nomnxibelelwano wokungena. Oku kuphucula amava okusebenzisa i-cell phone okanye ithebhulethi.
Ukomelezwa kwe-UI kunye ne-launcher yesicelo kunye nokuya kuhlola i-SharePoint 2016 okanye i-Office 365 yonke into elula ngakumbi.
I-Microsoft Flow- I-Sharepoint Workflows isaphila kwaye iqinile. Iimfuno zanamhlanje zihlala zikhulu kakhulu, kwaye ziza kuthatha ngaphezu kweSahlulo kuphela kunye neNtsha yokuPhamla ukuyivula.
I-SharePoint ye-2016 ye-Hybrid OneDrive yezoRhwebo yongeza kwi-versatility. Yenza indlela elula kubantu abafuna ukuhamba ngokuthe ngcembe kwi-cloud management. Nge-Sharepoint yakutshanje, abathengi banokuguqula kwiindawo eziMasayithi wam / i-OneDrive kwi-OnePrive ye-OnePrive yeBusiness. Oku kuya kubanika inkululeko yokusebenzisa iifayile zabo kwiphina indawo.
Amaqela eQela-amaqela e-SharePoint amaqela afumana ukuhlaziywa, kwaye ngokufanayo ngokwemvelo kuya kwenza Ofisi ye365 Iqela. Enye indlela yongezelela kakhulu, njengokuba kusetyenziswa iQela le-Office, liya kukunika i-Team Site egcweleyo, ekhoyo ngoku.
Umxhasi wangoku unokugcina nokubona imifanekiso kunye nokurekhodwa ngokuthumela kwilayibrari yecatshulwa enekethi eyodwa.
Esikhundleni sokuphikisa ngokukhawuleza, abathengi baninzi abasandul 'i-Microsoft Sharepoint banokuhambisa amaxwebhu okanye idatha kwi-OneDrive ukuya kwi-SharePoint yokulahla imiba yokumisa.
Inika ukhuseleko olungakumbi kubaxhasi-baphelo kunye nabalawuli bobabini kunye nelifu elibandakanya ukuhlala. Ihamba neenkcukacha zoLwazi lweeLungelo loLwazi (IRM) ukukhusela idatha ngokukhangela kunye nokugcina idatha kwiilayibrari zokwabelana nge-OneDrive yezoRhwebo.
Kwi-SSL 3.0, inqununu yokukhuseleka ifunyenwe, leyo ingavumela umprogram ukuba angayigcini ulwazi. Ukubambisana neenkcukacha ezigqwesileyo zakwa-Sharepoint ngoku zicima ubukhombisi bokubambisana kwe-SSL 3.0 njengento, kunye nokubala okubhaliweyo (umzekelo i-RC4) nemiba eyaziwayo.
Nge-SharePoint ye-2016 yokuphuma ekhoneni, iindawo ezinzima kwaye zinika amandla kwiindawo ezikhoyo ezi zinto zikulindeleke ukuba zenzeke ngokungaqinisekiyo zazalisekisa uninzi lwabalawuli be-IT ukulungiselela ukuhanjiswa kwabo kokulandelayo.
Inkambo nge-innovative Technology Solutions
Ukubonela phambili umdla wokwenza iingcali, ukuqhuba i-IT ukulungiselela umthengisi IYO sele iqulunqe inkcazo yeSabelo seSatifikethi sezobugcisa ezikhulayo. Le khosi epheleleyo ihlanganisa zonke iinkqubo zesofthiwe kwaye iza kuncedisa ekujonganeni nemiba ye-Sharepoint yangempela.